हजारभन्दा बढी जापानी सैनिकहरु बने गोहीको शिकार ! | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home अन्तर्राष्ट्रिय हजारभन्दा बढी जापानी सैनिकहरु बने गोहीको शिकार !
हजारभन्दा बढी जापानी सैनिकहरु बने गोहीको शिकार !
काठमाडौं : विश्वका धेरै खतरनाक स्थानहरु रहेका छन् । यसमध्येमा पनि रामरी टापुको यात्रा जो कोहीका लागि सम्भव छैन । यहाँ प्रत्येक कदममा मृत्यु सामुन्ने आउन पनि सक्छ । मनोरम दृश्य र साहसी कार्यले भरपूर रामरी टापुको कहानी पनि निकै खतरनाक रहेको छ ।
म्यानमारको यो टापुमा अहिले पनि गोहीले राज रहेको छ । यो क्षेत्रका गोही निकै खतरनाक हुन्छन् । यो टापु जनावरले मानिसलाई सबैभन्दा धेरै नोक्सानी पुर्‍याएको स्थानको रुपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा समावेश छ । यसमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् १९४५ मा घटेको एक घटनामा करिब १ हजार जापानी सैनिकहरु यहाँको पानीमा गोहीको शिकार बनेका थिए ।
कपालमा चाँया परेको छ ? यसरी गर्नुहोस उपचार
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित